MAREMMA SHEEPDOG DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Maremma Sheepdog Dog Fampahalalana sy sary
Piazza Navona (Pia), 15 taona eo aloha ary Saracina, 7 taona any aoriana, samy Pastore Maremano Abruzzese avy any Italia.
Alika mpiandry ondry Abruzzese
Maremano Abruzzese Shepherd
Mpiandry ondry italianina
Ny Maremma Sheepdog dia alika goavambe, mendri-kaja ary miavaka toa manana bera tahaka ny bera. Mahery ny valanoranony miaraka amin'ny kaikitry ny hety. Izy io dia manana orona mainty izay matetika lasa somary mavokely sy volontany. Ny sofina dia miendrika V, maranitra ary kely kokoa. Ny maso dia manana endrika velona sy marani-tsaina nefa tsy lehibe. Mahitsy ny lakandranon-orona. Ny rambo dia ambany volo ary matevina volom-borona misy volo matevina. Ny tadivavarana lalina sy boribory mahitsy hatrany amin'ny kiho. Ny volo lava, henjana ary tena be dia be dia misy onja kely. Ny akanjo ambany dia matevina. Ny loko palitao dia misy fotsy misy marika mavoana, mavo mavo na volomboasary mavo eo amin'ny sofina.
Ny Maremma dia mpiambina mpiambina iray mahay sy mahay mandanjalanja. Nandritra ny am-polony taona maro, nahavita fahombiazana ihany koa izy amin'ny alika mpiara-miasa. Malalaka kokoa sy mendrika, ity alika tsy mivadika, be herim-po ary tapa-kevitra ity dia mahomby amboa mpiambina tsy misy mpangalatra tsy tapaka. Voalaza tsara hoe fitiavana, fa tsy miankina. Ny tsipika fiasa izay napetraka hiasa dia tsy hanaraka mora foana ny baikonao rehetra satria ampitomboina sy ampiofanina hahaleo tena. Tokony hampiseho fitarihana milamina ianao, nefa mafy orina, azo antoka ary tsy miovaova amin'ny alika mba hihainoana azy. Tena manan-tsaina izy io ary ny fanazaran-tena dia mila fifanajana amin'ny fikirakirana sy ny feo, ary ambonin'izany rehetra izany, ny tsy fitoviana. Mifanaraka amin'ny alika sy biby hafa izany ary azo natokana kely amin'ny olon-tsy fantatra nefa tsy dia mafy. Ireo olona izay tsy raisina an-tanan-droa amin'ny fanananao dia hajanona amin'ny lalany. Ny Maremma dia tsy lehibe noho ny mpiambina andiany hafa, fa mbola manana fiaretana sy tanjaka azo ampitahaina ihany koa izy ary koa ny fahaizana mandoa ny 50 pounds fanampiny tsy ananany. Mailo sy mahaleo tena izy io. Mpiambina andriana manana fahefana lehibe sy fanoloran-tena mandritra ny androm-piainany, ity karazana ity dia mifehy ny andian'ondriny. Rehefa anisan'ny kitapo alika , ny olombelona dia tokony ho mpitarika fonosana amin'ny alika. Mamela alika misy habe amin'ny inona a mpitarika fonosan'ny olombelona mampidi-doza, satria ny amboa dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny kioka sy / na manaikitra. Ny olona mitazona alika mpiambina andian'ondry ho sakaiza dia tsy maintsy mahatakatra ny fomba milamina, fa kosa mampiseho ny fahefany amin'ny alika. Ny tompona pasif dia tsy hanana fifandraisana olombelona / alika mahomby. Amin'ny maha-biby fiompy azy, ny Maremma dia tsy dia mifatotra na be loatra. Na eo aza izany, ity karazana amboadia mpamono olona goavambe ity dia nanjary mpinamana mahatalanjona, nefa tsy nanary ny fahaizany miasa miavaka. Hiaro ny trano sy ny tompony izy io, ary mihaino tsara ny ankizy. The Maremma dia mpiandry ondry mahatalanjona ary tiany ny asany. Fahavalon'ny amboadia mahatsiravina izy io, fa tsy miray amin'ny lehilahy. Notehirizin'ny mpiandry ondry hohajaina indrindra, indrindra fa ireo tendrombohitra izay ahalehibe azy amin'ny lanezy dia mahatohitra ny hatsiaka na ny brambles. Tsy karazany ho an'ny vao manomboka izany.
Hahavony: 23,5 - 28.5 santimetatra (60 - 73 cm)
Lanja: 66 - 100 pounds (30 - 45 kg)
Ny Maremma Sheepdog dia tsy soso-kevitra amin'ny fiainana an-trano. Raha mahazo fanatanjahan-tena ampy izy dia hilamina ao an-trano. Zatra an-jatony hatramin'ny toerana malalaka, mila tokotany malalaka farafaharatsiny. Ny palitao amin'ny toetrandro rehetra dia mamela azy hatory eny ivelany. Ny Maremma dia tsy mifanaraka amin'ny toetr'andro mafana be. Tsy tokony hohetezina velively izy io, fa tokony hanana alokaloka sy rano iray lovia be foana amin'ny andro mafana.
Mila toerana malalaka ity karazana ity - ara-tsaina sy ara-batana. Raha tsy miasa amin'ny maha mpiambina andian'ondry mavitrika azy izy dia mila raisina isan'andro mandeha . Ny fandehanana kely manodidina ny sakana intelo isan'andro dia tsy ampy ho an'ity alika ity. Ilaina ny mandeha lavitra sy mifandimby. Tokony hanana fotoana matetika handosirana malalaka izy io. Rehefa mahazo fanatanjahan-tena sy fahalalahana ary toerana malalaka izy dia hangina ao an-trano.
Alika kely espaniola amerikanina akoho boribory
Ankizy 6 ka hatramin'ny 9 eo ho eo
Ny palitao amin'ny toetrandro rehetra dia mitaky fikolokoloana matetika sy fanosotra mba hanalana ny volo maty sy malalaka rehetra. Mitandrema bebe kokoa rehefa mandroaka ny alika.
Ny sasany milaza indray mandeha fa misy karazany roa: ny Abruzzese sy ny Maremmano. Ilay Abruzzese dia be tendrombohitra sy manana vatana lava kokoa, raha manana akanjo somary fohy kokoa kosa ny Maremmano. Na izany aza tamin'ny taona 1950, izy roa dia naorina tamin'ny fomba ofisialy ho toy ny karazany tokana miaraka amin'ny anarana hyphenated, Maremmano-Abruzzese. Alika mpiambina andiany eropeana ity, angamba taranaky ny zanak'ondry fotsy sy fotsy atsinanana izay niely tsikelikely nanerana an'i Eropa 2000 taona lasa izay: ny Karabash sy Akbash mpiandry ondry any Torkia, ny Kuvac any Slovakia, ny Pooch SY Komondor an'i Hongria sy ny Alika Mountain Pyrenean an'i France dia tafiditra ao anaty rany daholo. Ny razamben'ny Maremma dia niova ho lasa kely kokoa noho ireo mpiambina andiany hafa ary mitazona ny fahaleovan-tena sy ny tsy fitovizan'ny lovany. Na dia hita tsy tapaka any Great Britain aza izao dia mbola tsy fahita any amin'ny firenen-kafa ivelan'i Italia io karazany io. Sitra-po izy io ary tsy mora ny manofana fiaran-dalamby, fa miambina tokoa. Ny firenena niaviany dia i Italia.
Spirit the Italian Sheepdog (Maremma) avy any Aostralia amin'ny faha-2 taona - ' Ny fanahy dia manana toetra malefaka malefaka ary tsy toy ny Maremmas hafa izay tsy dia mibontsina mihitsy izy, raha tsy misy ny loza. Mihaona am-pahamendrehana amin'ny olon-tsy fantatra izy, ary koa amin'ny biby hafa. Nania nania izy saka ary taty aoriana saka. Ilay voalohany nampijaly tamim-paharetana tao anatiny, tsy niraharaha ny sakafon'ny saka, nitaona azy hanina. Nanjary tsy azo sarahina izy ireo ary ny saka dia nihalehibe ka tsy nandao ny lafiny Fanahy. Nandeha an-tongotra lavitra niaraka taminy ilay saka, ka nantsoinay hoe Alika kely. Ny alika kely dia lasa nalahelo tany an-danitra niaraka tamin'ny tranga ratsy tamin'ny Dunlops Disease (kodiarana fiara). Malahelo mafy azy izy ary 6 volana teo ho eo taty aoriana dia naka zanak'ondry mainty MErlOW izy. Samy niara-nisakafo sy natory izy roa, na dia atahoran'ny MErlOW aza alika hafa , mbola mandehandeha izy ary miseho andro maromaro avy eo manjavona. Spirit izao dia manana vady vaovao, VINO, 10 herinandro nohafarana purebred Sheepdog italianina izay tsy fantatry ny MErlOW fa ekeny ho sakaizan'ny Fanahy izy. '
Beau the Maremma Sheepdog amin'ny 11 volana
Bearfoot Belle, ny vadiko Maremma Sheepdog fony izy 10 volana
Beau the Maremma Sheepdog toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro miaraka amin'ny ondry
Sary natolotr'i Marco Petrella
TBreezy Meadow Maximilian sy Breezy Meadow Sophia miaraka amin'ny osy
Harlee the Maremma Sheepdog amin'ny 5 taona
'Ireto misy sary vitsivitsy vitako naka sary ilay zanak'alika Maremma Sheepdog Lulu. Tokony ho 4 1/2 volana izy izao (ary efa lehibe toa antsika laboratoara / Greyhound Miampita zazalahy!), ary amin'izao taona izao dia ny alika kely rehetra (tsy azo ihodivirana) hahatratra - ny vanim-potoana tsapany fa misy izao tontolo izao hafa misy mihoatra ny haavon'ny masony! Tsy dia mpihazakazaka firy izy, fa mahafinaritra azy kosa ny mandehandeha sy mihazakazaka toy ny goon, ary tsy mitsahatra miarahaba antsika eo am-baravarana na amin'ny maraina miaraka amina marimma marokoroko sy cheesy maremma. Mampidi-doza izy, nefa tianay ihany izy! '
orona pitbull manga miharo brindle
Lulu the Maremma Sheepdog toy ny alika kely amin'ny 4 1/2 volana
Hanna the Maremma Sheepdog puppy amin'ny 11 herinandro - 'Hanna dia zaza Maremma kolokolo mamy tokoa! Nandeha nipetraka tao amin'ny tranom-biby izy ary vonona ny ho lasa alika fiompiana ho an'ny biby fiompy ary nankafy isaky ny fotoana. Tiany ny mikoropaka sy mifampikasoka. '
Hanna the Maremma Sheepdog toy ny alika kely amin'ny 11 herinandro
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Maremma Sheepdog
Maremma Sheepdog Sary 1
shih tzu yorkie mix alika
aty sy fotsy fotsy lohataona anglisy
lohataona spaniel mainty sy fotsy
manga tick hound poodle mifangaro
vovoka fatorana volamena ho an'ny toerana mafana an'ny alika